ChiGerman Chiito Conjugation
Nyaya yatichazofukidza muchidzidzo chino: ChiGerman Chiito Conjugation Vadiwa shamwari, muchinyorwa chino, isu tichapa ruzivo nezve zviito zveGerman, mudzi wechiito, chisingaperi chinongedzo uye conjugation yezviito zveGerman.
Kusvika chidzidzo ichi, taona misoro yakapfava yevatangi vakaita semazuva eGerman, mwedzi yeGerman, manhamba eGerman, mwaka weGerman uye zvipikisheni zveGerman. Pamusoro peizvi, takaona zvidzidzo zvakawanda zvechiGerman senge mazwi echiGerman atinogona kushandisa muhupenyu hwezuva nezuva uye anobatsira kwazvo. Muchidzidzo chino, Mutauro wechiGermany chirevo Tichabata pamusoro wenyaya. Mushure mekuverenga chidzidzo chedu, tinokurudzira zvakasimba kuti muone hurukuro yevhidhiyo pazasi pepeji.
Chinyorwa chechiGerman chiito conjugation chidzidzo chinoda kutariswa, uye chinofanira kudzidzwa nekuyeuchidza zvakanaka. Izvo hazvigoneke kuti isu tigadzire mitsara nenzira kwayo tisina kudzidza chiito cheGerman kusangana. Isu tava kutanga kwezvose chii chiito, chii chiri mudzi wechiito, chii chiito chisingaperi, Ndezvipi zvakabatana, Maitiro ekubatanidza zviito muchiGerman Tichatarisa pazvinhu zvakakosha zvakadaro. Panzvimbo pekupa chiito chechiGerman kugadzirira kwakagadzirira, Zviito zveGerman Isu tinokudzidzisa iwe kufunga kwebasa kuti iwe ugone kupfura.
ChiGerman chisingaperi zviito
Sezvaunoziva, iyo isingagumi mamiriro echiito inonzi isingagumi. Mune mamwe mazwi, chimiro chisina kujairika chezviito, chakanyorwa mumaduramazwi chinonzi chimiro chisingaperi chechiito. Chisingapere chinokwana muTurkey -Mak uye -tandara zvakabatanidzwa. Semuyenzaniso; uya, enda, ita, kuverenga, ona Zviito zvakaita sezviito zviito. Kubatanidza chiito muchiTurkey, chirevo chisingaperi chinosiiwa uye nguva yakakodzera uye zvimisikidzo zvemunhu zvinowedzerwa kumudzi wechiito.
Semuyenzaniso; zvisingagumi verengaMak chiito -Mak Patinorasa chirevo chisingapere "verengaIzwi rekuti ”rinosara. Verenga chaiko, verengaMak ndiwo mudzi wechiito. Ngatiunzei nguva yakakodzera uye munhu anokwana pazwi rakaverengwa:
Verenga -ndaneta-um, pano "verenga"Mudzi wechiito,"ndaneta"Parizvino,"um”Ndiye munhu (ini) zvishongo. Uri kuverenga kana isu tiri kuverenga kana kuverenga Zviito zvakaita sezviito zvinobatanidzwa munguva yazvino asi zvakagadzirirwa vanhu vakaparadzana. Uri kuverenga (iwe), isu tiri kuverenga (isu), ivo vari kuverenga (ivo).
Tinofunga Asingagumi mafomu echiito muchiGerman Isu takapa ruzivo rwakakwana maererano.
Sezvauri kuona, patinoda kubatanidza chiito maererano nevanhu vechiTurkey, tinowedzera zvakasiyana kumudzi wechiito kune munhu wega wega. Izvi ndizvo zvakaitikawo muchiGerman. In Turkish -Mak uye -tandara zvisingapere zvisizvo muchiGerman -en uye -n zvakabatanidzwa. Kazhinji chinomiririra -en ndicho chinokwana, icho-- chinji hachiwanzoitika. Chiito chisingaperi muchiGerman -en kana -n inopera nechisungo. Kubva pachiito chisingaperi muchiGerman -en kana -n Patinobvisa chinamato, tinowana mudzi wechiito ichocho. Mune maduramanzwi kana mazita ezviito, chimiro chisingaperi chechiito chinogara chakanyorwa. Semuenzaniso, chiGerman chakaenzana chechiito kutamba is spielen.
Mukusingaperi playing with kubva muchiito -en patinobvisa chirevo mutambo shoko rinoramba riripo, mutambo shoko playing with ndiwo mudzi wechiito. Nguva uye munhu anonamira pamudzi wechiito mutambo inowedzerwa kushoko. Mumwe muenzaniso dzidza Ngatipe chiito, dzidza ChiGerman chakaenzana neshoko lernen chiito. dzidza chirevo chisingaperi kubva muchiito kureva -en paunobvisa goho rako lerne mudzi unoramba uripo. Kunyange zvirevo zvechiGerman zvichisunganidzwa, zvirevanguva uye zvisimbiso zvemunhu zvinowedzerwa pamudzi wechiito. lerne inowedzerwa kushoko.
Mazita akawanda anowanzozivikanwa uye asingawanzo ane zita Lerneral
Mushure mekudzidza pfungwa dzechikwiriso nemidzi muchiito Kubvumirana kwezviito zveGerman tinogona kupfuura. Ngatiratidzei kurerukana kwekubvumirana kwechiito chakareruka semuenzaniso pazasi.
Lernen, saka kuti tidzidze, ngatitangei chiito chimwe nechimwe zvinoenderana nevanhu vese varipo.
Iwe unofanirwa kutarisisa uye kuyeuka zvakabatanidzwa zvakawedzerwa kune chiito.
KUSUNGAMIRIRA KWEMAJEREMANE LERNEN VERBAL
Kuwedzera kune iyo NET
ini e lern-e Ndiri kudzidza
du st lern-st Uri kudzidza
er t lern-t Ari kudzidza (murume)
sie t lern-t Ari kudzidza (mukadzi)
es t lern-t Ari kudzidza (kwazvakarerekera)
wir en lern-z Tinodzidza
samt t lern-t Uri kudzidza
sie en lern-z Vari kudzidza
Aug en lern-z Uri kudzidza
Pamusoro lernen Isu taona kubatana kwechiito mune zvazvino. dzidza ndiko kusaperera kwechiito. Lerner ndiwo mudzi wechiito. Izwi en ndicho chirevo chisingaperi. Masuffixes ndiwo mudzi wechiito lerne inowedzerwa kushoko. Iye zvino ngatitaurirei chimwe chiito semuenzaniso.
Kukwezva KWEGERMAN KOMMEN VERBAL
ini e komm-e Ndiri kuuya
du st komm-st Uri kuuya
er t komm-t Ari kuuya (mukomana)
sie t komm-t Ari kuuya (mukadzi)
es t komm-t Ari kuuya (kwazvakarerekera)
wir en komm-en tiri kuuya
samt t komm-t Uri kuuya
sie en komm-en Vari kuuya
Aug en komm-en Uri kuuya
Hongu vadikani shamwari, pamusoro zvakare iri muchiGerman kommen zvinoti uyai Isu takapa mienzaniso yekubatanidzwa kweshoko muchiito chazvino. Mazita echiGermany Dzinodhonzwa munguva yemazuva ano seiyi. Iwo anonamirwa akaunzwa kumudzi wechiito muchiito chazvino anoratidzwa mutafura iri pamusoro.
Iwe unogona zvakare kugadzira zvimwe zviito maererano nevanhu nekutarisa patafura iri pamusoro, uchitora semuenzaniso.
Mutauro wechiGermany chirevo Chinyorwa chedu chakatumidzwa chichaenderera mberi muzvidzidzo zvedu zvenguva yemberi. Muzvidzidzo zvedu zvinotevera, tichaona izwi rechiito rechiGerman richisanganisa maererano nenguva yakapfuura neyemangwana. Iwe unogona zvakare kuwana ruzivo nezve echiGerman zviito zvakajairwa uye zveGerman zvisina kujairika zviito muzvidzidzo zvinotevera.
ChiGerman Verb Conjugation Vhidhiyo Chinyorwa Chidzidzo
ChiGerman Verb Conjugation Chinyorwa Kuguma
Anodiwa mushanyi, Mutauro wechiGermany chirevo Takasvika kumagumo kwenyaya yedu yainzi. Iwe uchawana yakawanda mienzaniso yekubatanidza mienzaniso muzvidzidzo zvedu zvinotevera.
Mutauro wechiGermany chirevo Unogona kunyora zvaunoda kubvunza nezvazvo, zvikumbiro zvakavanzika zvechidzidzo, mibvunzo, makomenti uye kushoropodzwa, nenzvimbo dzausinganzwisise mundima yemubvunzo paforamu.
Ndatenda nekushanyira saiti yedu, tinokushuvira iwe kubudirira muhupenyu hwako hwedzidzo.
Usakanganwa kukurudzira yedu saiti kune dzimwe shamwari dzako.
Kugadzira Mutongo wechiGerman
Sentensi chimiro muchiGerman
Zvidzidzo zveGerman zvekuvaka mitongo
Mutauro wechiGermany uye Mutongo Wakaiswa Mukati
ChiGerman Nguva Yakare (Prasens) Dzidzo
German Simple Sentences, German Sentence Samples
Mutsara weChinguva Chiripo cheGerman, Chinguva Chiripo cheGerman…